Waxaan falanqeyneynaa Huawei Mate 20 Pro, kamarad iyo ismaamul calan | Androidsis
Waxaan falanqeyneynaa Huawei Mate 20 Pro, kamarad iyo ismaamul calan
Michael Hernandez | | Noticias, Reviews
El Huawei Mate 20 Pro Waxay sii wadaa inay diirada saarto qayb weyn oo ka mid ah indhaha dadka isticmaala dhawr maalmood ka dib markii la bilaabay, waana iyada oo terminalkan shirkadda Shiinaha ay soo jeedisay in lagu daro hal qalab oo kaliya dhammaan astaamahaas oo laga dalban karo terminal ugu dhamaadka sare. Hadaadan arag kuweena dareenka ugu horeeya waad mari kartaa xiriirkan si aad u eegto.
Sidii aan ballan qaadnay, waxaan horeyba halkan ugu haynay falanqaynta qoto dheer ee Huawei Mate 20 Pro, oo ah terminaal nooga tagay dareenno wanaagsan oo si cad loogu dhejiyay inuu noqdo kan ugu wanaagsan 2018 iyo malaha qayb ka mid ah 2019. Nala joog oo soo hel astaamaha iyo waxqabadka Huawei Mate 20 Pro dib u eegistayada.
Sida had iyo jeer dhacda, waxaan qaadaneynaa booqasho gaaban oo ku saabsan dhammaan astaamaha ka dhigaya mid gaar ah, iyo sidoo kale fekerkeenna daacadnimada ah ee ku saabsan waxqabadka maalinlaha ah ee kuwani u fidiyaan isticmaalaha caadiga ah. Isha muhiimka ah ee Androidsis markan waxay dul heeysaa Huawei Mate 20 Pro, aalad noo timaadda rajo aad u sareysaMiyuu awoodi doonaa inuu noo soo bandhigo wax kasta oo aan ka filayno isaga? Fiiro gaar ah u yeelo wax kasta oo aan ka nidhaahno terminaalkan cajiibka ah. Si kastaba ha noqotee, Huawei Mate 20 - 6.53 Taleefanka gacanta iyo kiiska.
1 Naqshadeynta iyo agabyada: Huawei wuxuu wax walba dhigayaa adeegga loo yaqaan 'Mate range'
2 Qalabka: Mate 20 Pro ma yara, wax kasta oo yar
3 Muujin: "yar" yar oo aan mugdi gelinayn guddiga AMOLED
4 Kaamerooyinka: Ku dhowaad shaki la'aan waa kan ugu fiican suuqa
5 Is-maamul iyo barnaamij software: Markii ay umuuqatay wax aan macquul aheyn, Huawei ayaa sameeyay
6 Fikradda tifaftiraha: Suurtagal waa Android ugu fiican 2018
6.1 Ugu xun
6.4 Ugu fiican
Naqshadeynta iyo agabyada: Huawei wuxuu wax walba dhigayaa adeegga loo yaqaan 'Mate range'
Waxaan isku aragnaa soo saar ka hor kaas oo aan haysanno wax yar oo aan dib u eegno. Xaqiiqdii - waxa ugu horreeya ee dareenkeenna ku qabanaya isku habeynta kamaradaha, laakiin waxaan u hibeyn doonaa qeyb intaas ka ballaaran oo safka dambe ah. Dhinaca hore, qalooca labada dhinacba si dhakhso leh ayuu dareenkeenna u soo jiitaa, oo ah wax ilaa imika shirkadda South Korea ee Samsung ay ku jirto heerka ugu dambeeya oo runtii ku habboon Huwei Mate 20 Pro badhannada mugga leh iyo awoodda midabbada leh ee cajiibka ah. badhanka, dhanka bidix waxaan uga tagnay naqshad jilicsan. Isla sidaas oo kale ayaa ku dhacda qaybta sare oo ah halka kaliya ee aan ku leenahay dareemayaasha infrared. Waxyaabaha ayaa isbedelaya xagga hoose, waxaan leenahay isku xirka USB-C iyo saxaarada kaarka, oo ha u raadin godadka afhayeenka, Huawei waxay rabtay inay hal-abuurto iyadoo ka dhigaysa dekeddan USB-C afhayeenka, koronto xiiso leh, oo aan waligeed la arag taasna dhadhan aad u wanaagsan ayey afkayaga kaga tagtay.
Cabirka: 157,8 x 72,3 x 8,6
Miisaanka: 190 garaam.
Shaki la'aan aluminiumkeeda, muraayadda gadaal (aad ayey u fududahay in lagu wasakheeyo daabacadaha iyada oo aan la siinin wax yar) iyo qallooca shaashadda waxay naga dhigayaan inaan dareemo daqiiqada ugu horeysa inaan hor istaageyno boosteejada ugu qiimaha badan. Waxay dareemeysaa inay aad ugufiican tahay gacanta, way raaxeysan tahay culeyskiisuna waa la isku dheelitiray
Qalabka: Mate 20 Pro ma yara, wax kasta oo yar
Faahfaahinta farsamada Huawei Mate 20 Pro
Tusaale Mate 20 Pro
Nidaamka hawlgalka Qalabka 9.0 Android oo leh EMUI 9.0
Screen 6.39-inch OLED oo leh QHD + xalinta iyo saamiga 19.5: 9 oo leh 538 PPI
Gacaliye Huawei Kirin 980 (8 cores (2x Cortex-A76 at 2.6 GHz + 2x Cortex-A76 at 1.9 GHz + 4x Cortex A55 at 1.8 GHz))
Kaydinta gudaha 128 GB (Lagu ballaarin karo kaararka NMCard)
Kaamirada gadaal 40 + 20 + 8 MP oo leh apertures f / 1.8 f / 2.2 iyo f / 2.4 LED flash iyo 4K / 30FPS ama 1080p / 120FPS duubis leh Zoom x3
Kaamirada hore 24 MP oo leh f / 2.0 iyo duubis Full HD ah
Xuduudaha kala duwan A-GPS iyo GPS Bluetooth 5.0 USB Nooca-C Wifi 802.11 ac iyo LTE Cat 21 oo leh Dual NanoSIM (ku tiirsan suuqa)
Amniga Shaashadda shaashadda shaashadda ku taal iyo 3D iskaanka wajiga
Ilaalinta IP68 qiimeynta iyo ka hortagga dildilaaca
Batariga 4.200 mAh oo leh 40W xukun deg deg ah iyo 15 W wireless
Qiimaha 1049 euros
Falanqayntayada waxaan tijaabinay qaabka RAM 6 GB kaas oo bixiya dhibco gudaha Antutu 270.728 dhibcood, garaacista Xiaomi Mi 8 ama Samsung Galaxy S9 +.
Muujin: "yar" yar oo aan mugdi gelinayn guddiga AMOLED
Waxaan ka helaynaa Huawei Mate 20 Pro a 6,3-inch panel oo leh 1.440 x 3.210 xal, maxaa na siin doona go'aano QHD + inaan awood u yeelan doonno inaan uqeexno sida aan ujecelnahay iyadoo lagu saleynayo baahiyaheena, wax aan ku mahdinno taasna shaki la'aan waxay xoojineysaa madax-bannaanida badan. Go'aankani wuxuu muujinayaa boodbood yar oo xallin ah marka loo eego Huawei P20 Pro tusaale ahaan. Sidaas awgeed waxaan helnaa mid ka mid ah heerarka ugu wanaagsan ee fiiqitaanka suuqa, oo shaki la'aan in ka badan inta ku filan isticmaalka caadiga ah ee qalabka astaamahan. Waxay taageertaa isticmaalka multimedia adoo leh aad 19,5: 9 version ballaaran, mid kale oo kudarsada saamiyada layaabka leh. Si kastaba ha noqotee, EMUI waxay isticmaashaa nidaam xallin caqli badan oo ku kala duwan isticmaalka isticmaalka muddada dheer ee nolosha batteriga.
Waxaan khibrad gaar ah ku leenahay dibadda, iyada oo aan wax dhibaato ah lagala kulmin daawashada shaashadda xaalado dhalaalaya oo ka baxsan milicsiga taas oo ku dhowaad guddi kasta oo AMOLED ah. Waana in shirkadda Shiinaha ay ku soo biirtay adeegsiga shaashado bixiya waxqabad wanaagsan marka la eego isbarbar dhiga, xallinta iyo ismaamulka. Waa in la ogaadaa in EMUI ay bixiso suurtagalnimada in lagu dhuunto darajo iyada oo la joojinayo pixels-yada ku hareeraysan, sidaasna lagu qanco kuwa wax liidaya Waxaan ku soo koobeynaa boqolkiiba shaashad la isticmaalay oo ah 86,9%, taas oo aan haba yaraatee wax xun ahayn, inkasta oo ay ka sarreeyaan walaalkeed yar ee Huawei Mate 20.
Kaamerooyinka: Ku dhowaad shaki la'aan waa kan ugu fiican suuqa
Shirkadda Huawei waxay rabtay inay hal-abuur ku sameyso dhanka sawir qaadista waxayna umuuqataa inay ku guuleysatay. Waxay soo saartay Huawei Mate 20 Pro iyada oo la adeegsanayo kamarado ka dhan ah kan ay hadda bixiyaan shirkadaha kale ee soo saara, isla marka aan dhowr sawir qaadanno waxaan ogaaneynaa inay dhab ahaan u sameysay wanaaggeenna, in kasta oo software-ka uu wali leeyahay wax badan oo laga sheego. Waxaan leenahay seddex dareemayaal, mid leh 40 MP oo leh f / 2.8, mid kale oo leh 20 MP leh f / 2.2 iyo mid kale oo leh 8MP oo leh f / 2.4, in si wadajir ah ay u shaqeeyaan si aan caadi ahayn. Waxa ugu horeeya ee dareenkeena soo jiitay ayaa ah inaan ka soo baxnay inaan yeelano Zoom x2 caadi ah sida midka ay tartamo badan oo tartan ah leeyihiin, kuna raaxeysanayno a 'Zoom x3' iyo 'Zoom x5' kale oo qurux badan, dhammaantoodna waxay ku mahadsan yihiin isku dhafka lens-ka telephoto iyo xagalka ballaaran muraayadaha indhaha leh midka tiriya kamaradiisa.
Isku darka gacantiisa HDR ee gacanta ku haya sirdoonka macmalka ah iyo tirada badan ee qaababka toogashada iyo taageerada software ee barnaamijka kamaradaha ee Huawei uu leeyahay oo aad si faahfaahsan uga dhex arki karto falanqaynta fiidiyowga ayaa leh khibrad aad u wanaagsan. HDR waxay naga caawineysaa inaan hagaajino kala duwanaanta midabada ay qabato, baabi'inta dhalaalka xad dhaafka ah, wax horeyba ugu badnaa boosteejooyinka kale. Xaqiiqadu waa tan Habka Sirdoonka Artifishalku nama tusin inaan aad uga fiicanahay Guud ahaan, gacmaha wanaagsan marka sawirka la qaadanayo, si daacadnimo ah ayey isugu koobeysaa inay muujiso midabada iyadoo kuxiran nooca qabashada aan qaadano iyo xaddiga iftiinka ay hesho, laga yaabee inay doorbideyso in la doorto qabsi dabiici ah. Waxaan kaaga tagi doonnaa sawirada sawirada adigoon wax ka bedelin si aad adigu u fahanto awoodaheeda.
Inta aan joogno heerka wax lagu qoro waxaan helnaa suurtagalnimada helitaanka 4K / 30FPS ama 1080p / 120FPS qaraarada oo leh Zoom x3 iyadoo xasilloonida si caddaalad ah u wanaagsan sida aad ku arki karto falanqaynta fiidiyowga. Heerka fiidiyowga, Huawei Mate 20 Pro ma niyad jabayo, sidee bay noqon kartaa haddii kale. Maalmaheena maalinlaha ah waxaan helnay natiijo ka daran heerka codka qabashada, halka fiidiyowga si heer sare ah loogu farsameeyo softiweer, kaas oo soo saaraya wax yar oo "Dib udhac ah" inta udhaxeysa waxa aan ka aragnay shaashada iyo waxa aan qabanayno, laakiin taasi waa la qadarinayaa sida ugu dhakhsaha badan ee aad u eegto aragtida koowaad ee waxyaabaha la qabtay. Waxaan xasuusnaano inaan awoodi doonno inaan helno fiidiyowyo dhaqdhaqaaq gaabis ah oo gaaraya illaa 960 FPS.
Sawir gacmeed gudaha ah
Habka Habeenkii Gudaha
Macro aan lahayn HDR
Ma jiro HDR
Saamaynta indho la'aanta
Waxaan tagnaa kamaradda hore, halkaasoo ay Huawei sidoo kale ka taagan tahay mawjadaha kale waxayna go'aansatay in lagu daro hal dareemayaal oo keliya, oo ay sidoo kale taageerto sirdoonkeeda farsamada. Dareemahan hore wuxuu sidoo kale noo ogolaanayaa inaan sawirro ku qaadno qaab muuqaal leh ku dhowaad dhammaan awoodaha aan ka helno inta kale ee dareemayaasha, si kastaba ha noqotee, waxaan ogaanay inay la dhibaatooneyso dhibaato la mid ah kuwa kale ee badan ee ka jira Aasiya, softiweer aad u tiro badan oo ku jira "qaabka quruxda" in xitaa la hawlgeliyey ay naga dhigeyso inaan yeelano waji aad uga nadaafad badan sidii aan dhab ahaan u haysannay. Si kastaba ha noqotee, kamaraddan hore waxay u baahan doontaa xoogaa "xirfad" ah dhinaca adeegsadaha si loo helo natiijooyin tayo leh, waxay umuuqataa mid nasiib daro ah si loo helo natiijo fiican, taasina waxay kugu sababi kartaa xoogaa rajo xumo ah haddii aad si fiican ugu baratay waxqabadka kamaradaha waaweyn.
Is-maamul iyo barnaamij software: Markii ay umuuqatay wax aan macquul aheyn, Huawei ayaa sameeyay
Mate 20 Pro-kan waxaa ku jira baytari ah 4.200 Mah Taasi si la yaab leh uma saameyneyso dhumucda ama miisaanka aaladda, dhab ahaantii, waxaa igu adkaatay inaan aamino inay ku ridi lahaayeen batteriga halkaas haddii aysan ahayn xaqiiqda ah in is-maamul-u-helidda dhabta ah ee qalabku si fudud u muuqdo. Waxaan awoodnay inaan helno inta udhaxeysa 12 iyo 16 saacadood oo shaashad ah iyadoo kuxiran isticmaalka aan siino terminaalka, In kasta oo qayb ka mid ah cilladdu ay saaran tahay Huawei iyo maareynta batteriga caqliga u leh mahadnaqa EMUI 9.0. Taasi waa sababta aan si fudud ugu tagi karno maalinta labaad ee isticmaalka annaga oo aan u jiideynin fiilo. Laakiin Huawei waxay taxaddar ka bixisay in amarka Mate 20 Pro aan wax dhibaato ah lahayn. Waayo, Waxay noo qalabeysay xeedho degdeg ah oo awood u leh inay na siiso ku dhowaad laba maalmood oo madax-bannaan oo leh kaliya 58 daqiiqo oo lacag bixin ah ... Qeybtaan waxaan dhihi karaa oo kaliya "chapeau".
Lacag-siinta wireless-ka ah ayaan wax badan ka dambayn, sidoo kale waxaa lagu heli karaa nooca "dhakhso" ah oo si buuxda taleefanka ugu qaata muddo ka yar laba saacadood iyo badh. Laakiin ka taxaddar, lama filaanku halkan kuma eka. Nidaamka hagaajinta ee EMUI ay ku jirto batteriga ayaa noo oggolaanaya inaan la jaanqaadno nidaamka lacag-bixinta wireless-ka ee dhinaca dambe, taasi waa, waxaad awoodi doontaa inaad lacag ka qaadatid terminal kasta oo la jaan qaada nidaamka Qi kaliya adoo u soo dhoweynaya Huawei Mate 20 Pro, wadahadal lala yeesho asxaabta waqtiga kafeega ayaa la siiyaa.
Si kastaba ha ahaatee, EMUI waxay ku faani kartaa fududaan, laakiin sidoo kale dhinacyo gaar ah oo ku dambeeya hoos u dhigista shaqada cajiibka ah ee heerka qalabka. Animations-ku maahan kuwo gebi ahaanba la safeeyay, waxayna umuuqataa in terminal-ka ay ku adagtahay fulinta ficilada marka aysan run aheyn. Waa wax laga xumaado in laga faalloodo in ay nagu adag tahay in aan ka soocno EMUI 9.0 noocyadeedii hore, in kasta oo ay weli jiraan hawlo badan oo horyaala oo ay Huawei shaki la'aan awood u leedahay in ay horumariso wixii horay loo soo bandhigay, way iska cadahay in ay wax ka sii fiican samayn karaan, ugu yaraan heerka kala-guurka iyo fudeydka menus.
Fikradda tifaftiraha: Suurtagal waa Android ugu fiican 2018
Terminal-ka wuxuu na siiyay xoogaa dareenno aad u wanaagsan, gaar ahaan iyadoo la tixgelinayo u dhawaanshaha waqtiga oo leh in ka badan xifaaltan wanaagsan sida iPhone XS Max ama Samsung Galaxy Note 9. Waxaan si cad u sheegnay inaan isku aragnay ka hor mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan waayo-aragnimooyinka ilaa heerka qalabka ee Android illaa maanta, waxaannu dooneynaa inaan ammaanno qodobbada wanaagsan oo aan ku tusno waxa aan ugu jeclaannay ugu yaraan arrintan Huawei Mate 20 Pro.
Wasakh xaga dambe
Waxaan ku bilaabaynaa sidii had iyo jeer kuwii xumaa. Sidaad horayba u aqrisay falanqaynta oo dhan, qodobka sida weyn iiga niyadjabay ayaa ah Lakabka Customization ee Huawei. Waxaan u maleynayay in daabacaddan cusub ay dooran doonaan inay u oggolaadaan Android wax badan, inay wax ka bartaan qaladaadka sidii ay horeyba ugu dhacday Samsung. Si kastaba ha noqotee, Huawei wuxuu sii wadaa inuu wax ka beddelo kala-guurka iyo qaybo ka mid ah terminaalka oo aan u muuqan mid isku mid ah, tusaale ahaan ayaa ah in hannaanka tilmaanta tilmaantu ay u dhowdahay mid aan macquul ahayn in la isticmaalo, taas oo lid ku ah sharadka shirkadaha kale.
Waxaan jeclaanay qalabka guud ahaan xarunta, naqshadeynta, ilaa qalabka dhismaha waxaanna si cad ugu dhamaaneynaa awooda ay bixiso isku darka GPU iyo CPU. Way cadahay in terminaalku aanu u haynin xoqin uu ku jiido waxkasta oo aad ku tuurayso. Isla sidaas ayaa ku dhacda kamaradda, iyada oo la siinayo waayo-aragnimo karti u leh hal-abuurnimada suuq ay shirkaduhu si adag ugu halgamayaan. Shaki la'aan, qeybta, kamaradda iyo heerka multimedia, Huawei waxay qabatay shaqo ku dhowaad toban.
Qiimeynta xiddiga 5
Huawei Mate 20 Pro - Dib u eegis
Terminalkan ayaa la bixin doonaa Laga soo bilaabo 1.049 ee alaab-qeybiyeyaasha ugu waaweyn, waxaad ka heli kartaa xiriiriyahan. Waxaad ka iibsan kartaa Isbaanishka noocyadeeda madow, Emerald Green iyo Midnight Blue, oo ka tagaysa nooca 'Twilight' ee falanqayntaan sii deynta gaarka ah ee mustaqbalka. Noocan ah 6 GB oo RAM ah oo aan tijaabinay wuxuu yeelan doonaa 128 GB oo keyd ah, laakiin waxaad had iyo jeer iibsan kartaa nooca 8 GB ee RAM oo leh 256 GB oo keyd ah ama waxaad dooran kartaa ballaarinta adoo adeegsanaya kaarka lahaanshaha NM ee taageeraya ilaa 256 GB keydka xawaaraha sare wali suga sugida.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Reviews » Waxaan falanqeyneynaa Huawei Mate 20 Pro, kamarad iyo ismaamul calan
Ku tuur sixirro awood leh adoo sawiraya qaabab joomatari ah oo tilmaam ku leh Swipe Magic oo waalan
Dhawaan waxaad awoodi doontaa inaad cusbooneysiiso Pocophone F1 illaa Android 9 Pie